ယနေ့မနက် သိမ်ကြီးဈေးအကျော်တွင် ကားတိုက်မှုဖြစ်ပွား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ယနေ့မနက် သိမ်ကြီးဈေးအကျော်တွင် ကားတိုက်မှုဖြစ်ပွား
ယနေ့မနက် သိမ်ကြီးဈေးအကျော်တွင် ကားတိုက်မှုဖြစ်ပွား
Posted by manawphyulay on Jun 11, 2012 in Myanma News, News | 18 comments
ယနေ့ မနက် ၉ နာရီခန့်က တောင်းအေ့ကားတစ်စီးကားတိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တိုက်ခံရသူကတော့ ကျွန်မစီးလာတဲ့ကား အနားရောက်တော့ အဘွားအိုလို ယူဆရပြီး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးနေတာကို မြင်ရပြီး အပေါ်က မလုံ့တလုံ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ကားကတော့ ရွှေဘုံသာ မီးပွိုင့်မရောက်ခင်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်မလို့ ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ ကားကြောကို အမြန်မောင်းဖို့ ပြောနေတော့ စီးလာတဲ့ကားက တောက်လျှောက် ဆူးလေကို မောင်းတော့ မရိုက်လိုက်ရပါဘူး။ နောက်တစ်ချက် ကျွန်မ မြင်မိပြီးတော့ ရင်ထဲမကောင်းလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်မိရင် အမြဲမြင်ပြီး ပိုဆိုးမယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာလည်း စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိသွားပါတယ်။ ရဲတွေကော ပုလိပ်တွေကော ရပ်ကြည့်နေတဲ့ လူတွေပါ အများကြီး ၀ိုင်းအုံနေပါတယ်။ ကားလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အခါ လူတိုင်း သတိထားကြဖို့ ပြောချင်မိပါတယ်။
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လည်း မနက်က ရုံးလာတုန်း အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကို တွေ့ခဲ့ရလို့
စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ပြောနေတယ်လေ သေသွားတဲ့ သူက အူတွေထွက်နေတယ်ဆို ………
ပြောမနေနဲ့ ညီမလေးရေ.. ကြည့်မိပြီး ခုထမင်းတောင် စားမ၀င်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ရင်တုန်ပန်းတုန်နဲ့ ကားပေါ်က ဆင်းတော့တောင် ကင်မရာနဲ့ရိုက်မလို့လုပ်ပြီးမှ မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ရိုက်ပြီး ကြည့်မိနေမှာစိုးလို့… ကားကလည်း ဖြတ်ပဲသွားတော့ ကြည့်ပဲ ကြည့်လိုက်မိတာ…
အမလေး ……. ကြောက်စရာကြီး ……… ဒါ့ပုံမမြင်ရတာပဲကောင်းပါတယ် …. စိတ်ညစ်လိုက်တာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကို …. ယာဉ်တွေလည်းစည်းကမ်းရှိပါ လူတွေလည်းစည်းကမ်းရှိပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ် ….
မနက် 8 နာရီမတိုင်ခင်လောက်က တိုက်ခံရတာနေမယ်… မွန်ကစ်တို့ဖြတ်လာတော့ 8 နာရီ 10 မိနစ်လောက်ရှိနေပီ… စိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းကြီးပါ…
ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ် နေရာ အတူတူ ပဲလား၊ ကျတော်လွဲတာလား မပြောတတ်ဖူး။ ကျနော် ၉ နာရီ လောက်မှာ ဖြတ်လာတော့ ၁၅ လမ်း မှတ်တိုင် နဲ့ မောင်ခိုင်လမ်း မှတ်တိုင်ကြား ပွိုင့် ထိပ်တခု မှာ သွေးကွက် ကို ရေ လောင်း ထားတာ တွေ့ တယ်။
သိမ်ကြီးဈေးအကျော် ရွှေဘုံသာလမ်းမီးပွိုင့်မရောက်ခင်ဖြစ်တာ။ ၁၅ လမ်းနဲ့ မောင်ခိုင်လမ်းက မဝေးဘူးလား သွေးကွက်က အဲလောက်တော့ မကြီးပါဘူးရှင်။
ကျနော် အမှတ်မှား တာ ဖြစ် မှာ ပါ။
ဖြစ်စဉ် အတွက်တော့ အမှန်တကယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး မနက်စောစော ဆိုတော့ ဖြစ်တဲ့သူတွေ မြင်တဲ့သူတွေ အတွက် တယ်မကောင်းရှာ( မနက်မို့ ညနေမှာ ကောင်းတယ်လို့ မဆိုလိုပါ )
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပီး ဖလား…ဖလား တိုက်တဲ့ကားက စူပါကာစတန် မဖြစ်ပါစေနဲ့(သူတို့ဒွေ အစီးများတယ်)
အတိုက်ခံရသူဂေါ တိုက်တဲ့သူပါ သူရို့ဒွေ မဖြစ်ဂျပါစေနဲ့ ဆိုပီး ရင်တမမ ဆုတောင်းဘီး ၀င်ဖတ်ရတာ
တော်သေးလို့ အခုတလောက အင်း….သိဂျဒဲ့ အတိုင်း
ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ဆိုရင် ယာဉ်မောင်းရော၊ ခြေလျှင်လမ်းအသုံးပြုသူတွေပါ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းကို တိကျစွာလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မြို့ထဲလိုနေရာမျိုး(အဲ့ဒီသိမ်ကြီးဈေးနား)မှာ ဂုံးကျော်တံတား လုပ်ထားပေးတာတောင် … ကူးတဲ့ လူတွေကအလွယ်ကူးတုန်း ၊ ကားတွေကလည်း စည်းကမ်းမရှိ ၊ မှတ်တိုင်မှာ ကားတွေကြပ်တော့ ၇ပ်ချင်တဲ့နေ၇ာရပ် ၊ ဒီတော့ ကမောက်ကမတွေဖြစ်ပြီး အခုလို အဖြစ်ဆုံးတွေနဲ့ ကြုံကြရတာ ….
ကားတွေများလာတော. ယာဉ်မောင်းတွေက ပိုပြီး စိတ်မရှည်၊ ပိုပြီး စည်းကမ်း မရှိ ဖြစ်လာတယ်။ ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတယ်။ ပိုသည်းခံ၊ ပိုစည်းကမ်း ရှိသင်.တယ်။ လမ်းသွား လမ်းလာ တွေကလဲ ယာဉ်မောင်းတွေဘက်ကို နဲနဲ နားလည်ပေးရင် ပိုကောင်းတာပေါ.။ နှစ်ဦး နှစ်ဘက် ကိုယ်ချင်းစာပေးရင် မတော်တဆမှု.တွေ အတော်အသင်.လျှော.နည်းသွားမှာပါ။ Taxi သမားတွေလည်း အခုအရမ်းဆိုးနေသလိုပဲ၊ ခရီးသည် ရှာတာလည်း ရှာပေါ.၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ကားတွေကိုလည်း သတိထားသင်.ပါတယ်။ bus driver, sparer တွေကတော. တော်တော်အသိဥာဏ် ပေးဖို.လိုသေးတယ် ထင်တာပဲ။ သူတို.ပဲ ကြိုက်သလို လုပ်နေကြတာ။
ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်လုပ်သင့်တယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဆူးလေတစ်ဝိုက်မှာ ဖြတ်ကူးတဲ့သူတွေ ဖမ်းနေတာတော့ မြင်တွေ့ရတယ်။
သူ့နေရာနဲ့သူ စည်းကမ်းလိုက်နာရင်တော့ ဒီလိုမျိုး ယာဉ်တိုက်မှုတွေ လျှော့သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။